Xayeysiisyada Text Link Dethrones Google Adsense (Bloggeyga) | Martech Zone
Xayeysiisyada Text Link Dethrones Google Adsense
Talaado, July 3, 2007 Talaado, Oktoobar 4, 2011 Douglas Karr
Adsense Google wuxuu ahaa habka ugu muhiimsan ee dakhliga xayeysiinta ee boggeyga tan iyo markii la aasaasay. Aniguba waan haystaa Xubinta Guddiga xayaysiisyada ku jira quudintayda RSS, Kontera xayeysiinta macnaha guud ee qoraalladayda, iyo Xayeysiiska Text Link. Waxaan sidoo kale sameeyaa Faallooyinka illaa Dib U Eeg oo waliba mar mar hel Starbucks tabarucida adoo adeegsanaya PayPal. Haye!
Bisha wanaagsan, waxaa laga yaabaa inaan hoos u dhigo $ 300, oo ka fog $ 10k + in John Chow hoos u jiido, laakiin wali waa la ixtiraami karaa ra'yigeyga. Waxaad ogaan doontaa in boggeyga gurigeygu nadiif ka yahay dhammaan xayeysiinta. Waan dhigi kari lahaa xayeysiis meel walba dushiisa, laakiin ma doonayo inaan ku riixo xayeysiinta martida ku soo laabaneysa boggeyga marar badan. Taabadalkeed, waxaan u adeegsadaa xayeysiiska dadka waawayn ee igu dhaca si dadban, aniga oo u maraya raadinta iyo tixraacyada.
Google Adsense wuxuu ahaa, ilaa iyo hada, isha ugu weyn ee daqliga… ilaa hada. Xayeysiiska Text Link ayaa si rasmi ah u baabi'isay dakhligayga Google Adsense goor dambe, in kastoo. Bishii Meey, waxaan sameeyay labo doolar. Bishii Juun, waxaan iswaafajiyay dakhliga ugu dhow ee ay Adsense bixinaysay - laakiin ma aanan haysan Google Adsense ayaa la hagaajiyay. Laakiin bisha Luulyo, waxaan u taaganahay inaan keeno ku dhowaad laba jibbaar in ka badan inta leh 'Text Link Ads' marka loo eego Adsense. Cajiib.
Furaha Xayeysiiska Text Link guushu waa in loo dhisay baloog, ma aha degel internet. Xitaa waxay siiyaan qalab loogu talagalay isticmaaleyaasha WordPress si ay uga dhigaan xitaa sahlan. Xayeysiiyayaashu waxay iibsan karaan 'qoraallo' halkii ay ka gadan lahaayeen ereyo. Taasi waa sahlanaan layaableh, baloogleeyaha iyo xayeysiiyaha labadaba. Haddii aad ku qorto qoraal mawduuc la siiyay, miyaanay ahayn wax laga cabsado inaad iibsan karto mowduuc aad ogtahay inuu ku taageerayo alaabtaada? Fursad qurux badan.
WordPress: Sharaxaad Meta Dynamic Meta on Post kasta
WordPress: Laba shey oo SEO ah oo loogu talagalay abuurista Meta Tag
Jul 7, 2007 markay ahayd 1:47 AM
Boggeygu wuxuu jiray 3 bilood, laakiin wuxuu ku noolaa inta udhaxeysa cusbooneysiinta Google PageRank. Ma mudan tahay in la dalbado xisaab madbacadeed, mise waa inaan sugaa illaa cusbooneysiinta Google PageRank ee soo socota?
Waxaan maqlay in TLA ay dib u qiimeyn ku sameyneyso goobihii aan markii hore la ansixin, laakiin waxaan sidoo kale maqlay in howsha ay qaadan karto a run ahaantii waqti dheer.
Jul 7, 2007 markay ahayd 10:23 AM
Si daacadnimo ah uma bixin doono akoonka daabacaha, waan sugi lahaa. Dhanka kale, waad isticmaali kartaaMaamulayaasha shabakada Google si loo hubiyo in bartaadu hagaagsan tahay. Haa TLA laakiin ma hubo waqtiga. Waan aqriyay qoraalkan halka blogger uu ku ogolaaday bartiisa. Si la yaab leh, runti ma uusan helin taraafikada uu u baahan yahay si uu u sameeyo lacag fiican. Waxaan diirada saari lahaa wadista taraafikada badan. Waxaan jeclahay inaan ku sameeyo iyada oo loo marayo qarxinta faallooyinka boggaga kale ee aanan waligey booqan. Waxaan ku darayaa wadahadalka, kaliya ma dhahayo 'hey!'. 🙂 Waxaan u maleynayaa in dadka wax qora ee wax qora ay badankood booqdaan faallooyinkooda. Sare u qaad taraafikadaas wax walbana way raaci doonaan!
Jul 12, 2007 markay ahayd 6:43 AM
Waxaan codsaday TLA dhawr bilood ka hor laakiin la iima oggola. Waxaan qiyaasayaa in boggeygu uusan abuureynin taraafiko ku filan ama uusan haysan macaamiil ku filan Feedburner. Ma hubo shuruudaha ay u adeegsadaan hawsha oggolaanshaha?
Nov 17, 2009 saacadu markay tahay 12:32 PM
Uma maleynayo in macaamiisha feedburner ay ka mid yihiin shuruudaha, waxaan heystaa 6 macaamiil oo waxaan soo galay :).
My pagerank waa 4 inkasta, markaa waxaa laga yaabaa taasi waa sababta aan u galay…
Ma jiraa qof fikrad qaba haddii aad wada isticmaali karto TLA iyo google adsense?
Jul 13, 2007 markay tahay 12:05 PM
Tilmaamo waaweyn oo dhowaan ku saabsan xayeysiinta. Waxaan ka fekerayaa inaan dejiyo laba websaydh oo kala duwan oo aan ku tijaabiyo biyaha xayeysiinta.
Oktoobar 14, 2007 at 10:39 AM
Waad ku mahadsantahay talooyinkaaga waxtarka badan. Ma ii sheegi kartaa haddii ay macquul tahay in la isticmaalo TLA iyo Adsense isla degelkan? ma ahan mid ka soo horjeedda Google TOS? Mahadsanid!
Oktoobar 14, 2007 at 5:34 PM
Kama soo horjeedo Google TOS inay adeegsato ilaha kale ee xayeysiinta. Xaqiiqdii, waxaad kaheli doontaa baloogyada badankood oo leh dakhli joogto ah oo socodsiiya ilo badan.
Nov 19, 2009 saacadu markay tahay 1:59 PM
Waxaan hadda bilaabay inaan isticmaalo xayeysiisyada xiriirinta qoraalka, waxaan arki doonaa sida wax u soo baxaan!